Powder Coatings akatanga kuunzwa kumusika pakati pemakore ekuma1950. Mapeji ekutanga aive thermoplastic, ayo akaiswa pakukora kwazvo firimu uye akapa nzvimbo shoma dzekushandisa. Nhasi mapoda mazhinji ari thermosetting, yakavakirwa paEpoxy uye kana Polyester resin masisitimu. Powder coatings akaonekwa kuti ane mari uye anosvibisa nzira dzemahara kune maindasitiri anonyungudutsa pendi.
Shot blasting inzira inoshandiswa kuchenesa, kusimbaradza kana kukwenenzvera simbi, inova nzira yetekinoroji yekubvisa tsvina dzakasiyana siyana kubva munzvimbo dzakasiyana nekushandisa abrasive. Iyo yakakosha maitiro ekudzivirira kwepamusoro uye zvakare kusati kwagadzirira kwepasi kusati kwaenderera mberi kugadzirisa, senge welding, coloring, nezvimwe.
Kuputika kwejecha kana kuputika kwebead ishoko rinozivikanwa rekuita kutsetseka, kuumba uye kuchenesa nzvimbo yakaoma nekumanikidzira zvidimbu zvakaomarara pane iyo nzvimbo nekumhanya kukuru; Mhedzisiro yacho yakafanana neyekushandisa sandpaper, asi inopa yakawedzera kupedzisa pasina matambudziko pamakona kana crannies. Kuputika kwejecha kunogona kungoerekana kwaitika, kazhinji semhedzisiro yezvimedu zvinopeperetswa nemhepo zvichikonzera kukukurwa kweaeolian, kana kugadzirwa, uchishandisa mweya wakamanikidzwa.
Paint ndiyo inonyanya kushandiswa kuchengetedza simbi. Pendi masisitimu ezvivakwa zvesimbi akagadzirwa nekufamba kwemakore kuti aenderane nemutemo wezvakatipoteredza weindasitiri uye mukupindura zvinodiwa kubva kubhiriji uye varidzi vezvivakwa zvekuvandudza kusimba kwekuita. Tsanangudzo dzemazuva ano dzinowanzo sanganisira kutevedzana kwekunamira kwependi kana pendi inoiswa pamusoro pesimbi yekumisikidza kugadzira 'duplex' coating system. Iyo inodzivirira pendi masisitimu inowanzo sanganisira primer, undercoats uye majasi ekupedzisa. Kazhinji, imwe neimwe yekuputira 'layer' mune chero inodzivirira ine basa chairo, uye mhando dzakasiyana dzinoiswa mune imwe kutevedzana kweprimer inoteverwa nepakati / kuvaka majasi muchitoro, uye pakupedzisira kupedzisa kana bhachi repamusoro mungave muchitoro kana. panzvimbo.
Sechikamu chekuzvipira kweQingdao TianHua kupa vatengi-yakazara-sevhisi chigadzirwa kugadzira, isu takagadziridza coating line yekubata ese maindasitiri ekupendi uye kuputika mabasa. Imba yedu yependi inobvumira kufambiswa kwemhepo kwepamusoro uye kutonga kusvibiswa, uye izere nekusimudza kwakasiyana-siyana uye yekubheka-pakurapa chinhu chinobika pakupera kwemhando yependi iri nani. Kusangana nezvinodiwa zvenzvimbo yepamusoro-yekugadzira, yedu yakasimbiswa indasitiri kupenda, kuputika uye upfu yekuputira masevhisi anogona kushanda nezvigadzirwa zvinoyera kusvika 3.5m×1.2m×1.5m.